सोच्दै नसोचेको भयो ! प्रहरीलाई भ्यानभित्रै लात्ताले हाने, त्यसपछी के गरे ? - Samadarshi Sanchar
सोच्दै नसोचेको भयो ! प्रहरीलाई भ्यानभित्रै लात्ताले हाने, त्यसपछी के गरे ?
समदर्शी संचार, बिहिबार, १० भदौ, २०७८, दिउँसोको ०२:१४ बजे
भदौ ९ नेपालमा थुनुवालाई कुनै ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा उनीहरु भाग्ने गरेको खबर सार्वजनिक हुनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ। प्रहरीकै पञ्जाबाट थुनुवाहरु सजिलै उम्किन्छन् र उनीहरुलाई खोज्न फेरि प्रहरीलाई नै सास्ती हुन्छ।